Leave a Reply to Salma xassan Cancel reply
Qalbi waa musalsal aad u xiiso badan oo aad ka daawan kartid qeylonet.com. Musalsalkaan oo xambaarsan sheeko jaceyl, farxad iyo murugo. Welibana aad uxiisa badan waxaad goordhow asagoo dhameystiran ka...
Gef Jaceyl (Dhamaad)
Gef Jaceyl waa musalsal aad u xiiso badan oo aad ka daawan kartid qeylonet.com. Musalsalkaan oo xambaarsan sheeko jaceyl, farxad iyo murugo. Welibana aad uxiisa badan waxaad goordhow ka daawan...
Yarka Qaldan Waa Musalsal Cusub Oo QeyloNET Media Ugu Talo Gashay Macaamiisheeda Ku Xeran, Waa Musalsal Aad U Macaan Qiso, Sheeko, Murugo Iyo Jaceyl Leh. Waxaad Ka Daawan Kartaa QeyloNET...